Mahafantatra Tsara Anao Andriamanitra (Salamo 139:1)
Mahafantatra Tsara Anao Izy
“Jehovah ô, mandinika ahy amin’ny an-tsipiriany ianao, ka mahalala ahy.”—SALAMO 139:1.
NAHOANA NO MISY TSY MINO AN’IZANY? Maro no mieritreritra hoe tsy misy zavatra hitan’Andriamanitra amin’ny olombelona afa-tsy ny hoe mpanota izy ireo, izany hoe maloto sy tsinontsinona. Nanamelo-tena be i Kendra, satria tsy nahavita nanaraka tsara ny didin’Andriamanitra mihitsy. Tena ketraka izy ka tsy nivavaka intsony.
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? Tsy mifantoka amin’ny fahadisoantsika i Jehovah. Fantany tsara mantsy isika. Milaza ny Baiboly fa “fantany tsara ny nanaovana antsika, ary tsaroany fa vovoka ihany isika.” Tsy mamaly antsika “araka ny fahotantsika” koa izy, fa tena mamela antsika raha mibebaka isika.—Salamo 103:10, 14.
Hoy i Davida, ilay mpanjaka tany Israely noresahina tao amin’ny lahatsoratra voalohany: ‘Nahita ahy ny masonao na dia mbola vao niforona aza aho. Ary voasoratra tao amin’ny bokinao ny faritra rehetra amin’izay ho vatako. Diniho amin’ny an-tsipiriany aho, Andriamanitra ô, ary fantaro ny foko.’ (Salamo 139:16, 23) Nanao fahadisoana i Davida ary fahotana lehibe ny sasany aminy. Resy lahatra anefa izy hoe mbola nandinika ny fony ihany i Jehovah, ka fantany fa tena nibebaka izy.
Mahafantatra anao kokoa noho ny olona rehetra i Jehovah. Hoy ny Baiboly: “Ny olona mijery izay hitan’ny maso, fa i Jehovah kosa mijery ny fo.” (1 Samoela 16:7) Fantatr’Andriamanitra tsara hoe misy vokany aminao ny toetra nolovanao, ny nanabeazana anao, ny manodidina anao, ary ny maha izy anao. Na manao fahadisoana aza ianao, dia hitany hoe efa miezaka manatsara ny toetranao ianao ary tena sarobidy aminy ny ezaka ataonao.
Raha mahalala tsara anao àry Andriamanitra, ahoana no ampaherezany anao?
Hizara Hizara Mahafantatra Tsara Anao Izy